" Asi wakasonganiswa naShe, wava mweya mumwe naye" (1 VaKorinte 6 ndima 17).
Kune vasinganatsi kuziva kuti Chikristu chii. Saka vanorarama sevanhu venyika ino. Havanzwisisi rudzi rwavo. Saka vamwe vavo vanorwara. Vanotambudzwa. Vanogara vachitsvaka kurapwa nemishonga. Asi kuda mumwe angashamisika nazvo. Saka angabvunza achiti, "Saka muri kuti Mukristu haafaniri kurwara here?"
Hongu! Mukristu haafaniri kurwara! Mukristu ane hupenyu husingaperi. Munhu weropa raMwari. Ropa iri rinouraya zvirwere. Harivori. Munhu werudzi urwu haafi. Izvi ndizvo zvakanga zvakaita Jesu. Vakanga vari verudzi urwu. Saka havana pavakamborwara. Wava weropa irivo iwe. Haribati zvirwere. Hutachiona hahugoni kupinda mariri. Hareruya! Ndiko kusaka Jesu vakataura mashoko ari muna Marko 16 ndima 17 kusvika 18. Vakati, "Zvitaridzo izvi zvichavonekwa pavanhu vanotenda. Vanganwa zvinouraya vanhu. Asi zvinhu izvi hazvingavakuvadzi ivo". Jesu ndivo vakataura mashoko aya. Zvino, Jesu havana wavakamborevera nhema.
Mukristu munhu werudzi rweVamwari. Haaverengerwi kuboka revanhu venyika ino. Haasi munhu anonamata chete. Chikristu haisi imwe yenzira dzekunamata nadzo Mwari. Vakristu ndeimwe mhando yevanhu. Vanhu verudzi rwaMwari. Mukristu munhu akatakura Kristu. Munhu uyu anenge atova weropa raKristu. Kuda iwe wakazvarwa patsva. Kristu vava kugara mauri. Vakauya pawakazvarwa patsva pacho.
Unofanira kunzwisisa izvi. Unozogara uzere mufaro. Apostora Petro vanotaura pamusoro pemufaro uyu. Mufaro unowanikwa paVakristu. Vanoti haugoni kutsanangurwa. Uzere nekubwinya. Asi hazvingakoni kudero. Ndizvo zvawakarongerwa naMwari. Vanoda kuti kubwinya kwavo kuvonekwe pauri. Vanoda kuti kururama kwaKristu kuvonekwe pauri. Wakabatanidzwa naIshe. Wava werudzi rumwe navo. Hapana chichagona kukupatsanurai.
Saka zvirwere zvingawanikwa pauri sei? Ungashaiwa zvinhu zvehupenyu huno sei? Ungavodzwa moyo sei? Ungasurukirwa sei? Zvinhu izvi zvinongoitika kuvanhu venyika ino. Iwe wasiyana nevanhu ava. Asi VaFiripi 2 ndima 12 inoti, "... rambai muchishandira ruponeso rwenyu nokutya nokudedera".
Saka rarama hupenyu hweChikristu. Ndiko kuti zvinoitika paMukristu zvivonekwe pauri. Ndizvo zviri kurairwa mundima iyi. Shoko raMwari haringoshandi. Iwe ndiwe unorishandisa. Simba rekurishandisa rinotova mukati mako. Tora Shoko raMwari. Rigamuchire. Rishandise pakurarama kwako. Hupenyu hwako hunozoyevedza. Hunozozara kubwinya.
Kristu vari mandiri. Vapenyu. Vari kutoshanda. Saka ndakasiyana nevanhu venyika ino. Ndakaitwa munhu werudzi rweVamwari. Saka hupenyu hwaKristu hunovonekwa pandiri. Ndinotonga zvirwere. Ndinotonga matenda. Handikundikani. Handina chandinoshaiwa. Ndinokurira zvinhu zvose zvaSatani. Hareruya!
Mugovera, 7 Zvita 2019)